Kulan looga xaajoonayo ka hortagga falalka argagixisada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kulan looga xaajoonayo ka hortagga falalka argagixisada
La daabacay måndag 24 april 2017 kl 08.50
Goobtii uu falku ka dhacay oo lagu harqiyey qoraallo iyo ubax. sawir: Pontus Lundahl/TT
Muddo laba toddobaad ay ka soo wareegtay falkii argagixisada ee ka dhacay bartamaha magaalada Stockholm waddada Drottninggatan ayey kulan isugu iman doonaan maanta xubno ka socda dawladda iyo xisbiyada mucaaradka ee garabka midig sidii ey uga wada xaajoon lahaayeen ka hor-tagga falalka argagixisada.
In kor loo qaado dagaalka lagula jiro argagixisada ayaa ah mid mid ey ka siman yihiin garabyada siyaasaddu. Iyadoona fikirrada laga mideeysan yahey ey ka mid yihiin wada-shaqeeyn dheeri ah ee dhex marta hayadaha kala duwan iyo sidoo kale dembiyeeynta falalka la xiriira argixisada.
Wasiirka arrimmaha gudaha Anders Ygeman (S) ayaa la filayaa inuu soo ban-dhigo fikirro la xiriira howlaha ka hor-tagga argagixisada.
Baaritaan ayaa loo saari doonaa habkii loo dembiyeeyn lahaa xiriirrada lala sameeyo ururrada argagixisada. Middaasi oo ay macnaheedu noqon kari doonto sidii sharciga loo hor keeni lahaa xiriirka lala sameeyo iyo taageerada loo fidiyo ururrada xag-jirrada. Halka dhammaantood xisbiyada garabka midig ey taabac-san yihiin fikirkaa.
Intaa waxaa dheer in la fududeeyo habka wada-sahqeeynta ee akhbaar is-dhaafsiga hayadaha kala duwan ee ciidanka ammaanka, kuwa nabad-sugidda iyo wakaaladda socdaalka, sidii ey si ka fudud isugu dhaaf-san lahaayeen akhbaaraha qarsoodiga ah. Middaan qudheeda ayey taageero u hayaan dhammaan xisbiyada garabka midig.
Fikirka saddexaad ee la fileyo inuu kulanka ku soo ban-dhigo wasiirka arrimmaha gudaha Sweden Anders Ygeman (S) ayaa ah isticmaalka jeebada elektroonikada ee lugta. Jeebadaasi oo loo isticmaali doono dadyoowga looga shaki qabo ammaanka dalka, hase yeeshee aan siyaabo kala duwan aawadood dalka looga tarxiili karin. Fikirkan ayey taabac-san yihiin xisbiyada Modaraterna (M) iyo Kristendemokraterna (KD), halka ey shaki ka qabaan xisbiyada Center (C) iyo Liberalerna (L).
Kulanka ayaan lagu casumin oo dibadda ka taagan labada xisbi ee Vänsterpartiet (V) iyo Sverigedemokraterna (SD).
Fikirrada qaarkood oo la isku raacey
måndag 24 april 2017 kl 17.12